Ndị Juu Anụ Olu Chineke, ma Hà Ga-enwenụ Okwukwe (Jọn 12) | Ihe Ndị Mere ná Ndụ Jizọs
ỌTỤTỤ NDỊ NỤRỤ OLU CHINEKE
IHE A GA-EJI KPEE HA IKPE
Mgbe Jizọs nọ n’ụlọ nsọ na Mọnde, abalị iri n’ọnwa Naịsan, o kwuru gbasara ọnwụ ọ na-aga ịnwụ n’oge na-adịghị anya. Ọ nọ na-echegbu onwe ya gbasara otú ọnwụ ya ga-esi mee ka a kọchaa Chineke. N’ihi ya, ọ gwara Chineke, sị: “Nna, mee ka aha gị dị ebube.” Otu olu si n’eluigwe kwuo, sị: “Emewo m ka ọ dị ebube, m ga-emekwa ka ọ dị ebube ọzọ.”—Jọn 12:27, 28.
Olu a gbara ndị nọ nso gharịị. Ụfọdụ chere na ọ bụ égbè eluigwe gbara. Ndị ọzọ kwuru, sị: “Mmụọ ozi agwawo ya okwu.” (Jọn 12:29) Ma, ọ bụ olu Jehova ka ha nụrụ. Ihe a abụghịkwa nke mbụ ụmụ mmadụ na-anụ olu Chineke n’oge Jizọs nọ n’ụwa.
Nke mbụ bụ mgbe e mere Jizọs baptizim. N’oge ahụ, Jọn Onye Na-eme Baptizim nụrụ ka Chineke kwuru banyere Jizọs, sị: “Onye a bụ Ọkpara m, onye m hụrụ n’anya, onye ihe ya masịrị m.” Nke abụọ bụ mgbe e mechara Ememme Ngabiga nke afọ 32. N’oge ahụ, Jizọs nwoghara n’ihu Jems, Jọn, na Pita. Ha atọ nụrụ ka Chineke kwuru, sị: “Onye a bụ Ọkpara m, onye m hụrụ n’anya, onye ihe ya masịrị m; geenụ ya ntị.” (Matiu 3:17; 17:5) Ma, na nke ugboro atọ a Jehova kwuru okwu, o kwuru ya otú ọtụtụ ndị ga-anụ ya.
Jizọs sịrị: “Olu a kwuru okwu abụghị n’ihi m, kama ọ bụ n’ihi unu.” (Jọn 12:30) Olu ahụ ndị Juu nụrụ gosiri na Jizọs bụ Ọkpara Chineke n’eziokwu, ya bụ, Mesaya ahụ e kwere ná nkwa.
Ihe ọzọ bụ na otú Jizọs si bie ndụ ya mere ka a mara otú ụmụ mmadụ kwesịrị isi na-ebi ndụ. O gosikwara na Setan bụ́ Ekwensu, bụ́ onye na-achị ụwa, kwesịrị ọnwụ. Jizọs kwuru, sị: “A na-ekpe ụwa a ikpe ugbu a; ugbu a, a ga-achụpụ onye na-achị ụwa a.” Jizọs ịnwụ apụtaghị na e meriela ya, kama, ọ pụtara na o meriela. Gịnị mere nke a ji bụrụ eziokwu? O kwuru, sị: “Ma mụ onwe m, ọ bụrụ na e si n’ụwa welie m, m ga-adọta ụdị mmadụ niile n’ebe m nọ.” (Jọn 12:31, 32) Jizọs ga-esi n’ọnwụ ọ ga-anwụ n’osisi ịta ahụhụ dọta ndị mmadụ n’ebe ọ nọ ma mee ka ha nweta ndụ ebighị ebi.
Mgbe Jizọs kwuchara banyere ‘isi n’ụwa welie ya,’ ìgwè mmadụ ahụ gwara ya, sị: “Anyị nụrụ n’ime Iwu ahụ na Kraịst ga-anọgide ruo mgbe ebighị ebi; oleekwanụ otú i si na-asị na a ghaghị iweli Nwa nke mmadụ elu? Ònye ka Nwa nke mmadụ a bụ?” (Jọn 12:34) N’agbanyeghị olu Chineke ha nụrụ na ihe ndị ọzọ merenụ, ọtụtụ n’ime ha ekweghị na Jizọs bụ Nwa nke mmadụ n’eziokwu, nakwa na ọ bụ Mesaya ahụ e kwere ná nkwa.
Jizọs kwukwara ọzọ na ya bụ “ìhè.” (Jọn 8:12; 9:5) Ọ gwara ìgwè mmadụ ahụ, sị: “Ìhè ahụ ga-anọtụkwu nwa oge n’etiti unu. Na-ejegharịnụ mgbe unu nwere ìhè ahụ, ka ọchịchịrị wee ghara ikpuchi unu . . . Mgbe unu ka nwere ìhè ahụ, nweenụ okwukwe n’ìhè ahụ, ka unu wee bụrụ ụmụ nke ìhè.” (Jọn 12:35, 36) Mgbe Jizọs kwuchara ihe a, ọ gara zoo n’ihi na abalị iri n’ọnwa Naịsan abụghị oge ọ ga-anwụ. Ọ bụ n’oge Ememme Ngabiga, n’abalị iri na anọ n’ọnwa Naịsan, ka ‘a ga-eweli ya,’ ya bụ, ka a ga-akpọgide ya n’osisi ịta ahụhụ.—Ndị Galeshia 3:13.
Ọ bụrụ na anyị eleba anya n’ihe mere n’oge Jizọs na-eje ozi ya n’ụwa, anyị ga-achọpụta na okwukwe ndị Juu na-enweghị na Jizọs mezuru amụma dị na Baịbụl. Aịzaya buru amụma na a ga-anyachi ndị mmadụ anya, meekwa ka obi ha kpọọ nkụ nke na ha agaghị echegharị, a gwọọ ha. (Aịzaya 6:10; Jọn 12:40) N’eziokwu, ọtụtụ ndị Juu ekwetaghị n’ihe ndị gosiri na Jizọs bụ Onye Nnapụta ahụ e kwere ná nkwa, bụ́ onye ha ga-esi n’aka ya nweta ndụ ebighị ebi.
Nikọdimọs, Josef onye Arimatia, na ọtụtụ ndị ọzọ na-achị achị “nwere okwukwe n’ezie” na Jizọs. Ma, hà ga-emenụ ihe ndị gosiri na ha nwere okwukwe, ka egwu ịchụpụ ha n’ụlọ nzukọ, ma ọ bụ ‘ịhụ otuto mmadụ n’anya,’ ọ̀ ga-eme ka ha ghara ime ihe ndị gosiri na ha nwere okwukwe?—Jọn 12:42, 43.
Jizọs kwuru otu n’ime ihe inwe okwukwe na ya pụtara. Ọ sịrị: “Onye nwere okwukwe n’ebe m nọ nwere okwukwe, ọ bụghị naanị n’ebe m nọ, kamakwa n’ebe onye zitere m nọ; onye na-ahụ m na-ahụkwa onye zitere m.” Ihe Chineke gwara Jizọs kụzie, bụ́kwanụ ihe Jizọs nọgidere na-akụzi, dị ezigbo mkpa nke na Jizọs sịrị: “Onye na-eleda m anya, nke na-adịghịkwa anabata ihe m na-ekwu, nwere onye ga-ekpe ya ikpe. Ọ bụ okwu m kwuru ga-ekpe ya ikpe n’ụbọchị ikpeazụ.”—Jọn 12:44, 45, 48.
Jizọs mechiziri okwu ya, sị: “Ihe m kwuru esighị n’echiche m, kama ọ bụ Nna m bụ́ onye zitere m nyere m iwu ihe m ga-akọ na ihe m ga-ekwu. Amakwaara m na iwu ya pụtara ndụ ebighị ebi.” (Jọn 12:49, 50) Jizọs ma na n’oge na-adịghị anya, ọ ga-eji ndụ ya chụọ àjà maka ndị nwere okwukwe na ya.—Ndị Rom 5:8, 9.
Olee ugboro atọ ndị mmadụ nụrụ olu Chineke n’oge Jizọs?
Ole ndị ọchịchị kweere na Jizọs? Ma, olee ihe nwere ike ime ka ụfọdụ ndị ọchịchị ghara ikwu ya n’ihu ndị mmadụ?
Olee ihe a ga-eji kpee ndị mmadụ ikpe “n’ụbọchị ikpeazụ”?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Ndị Juu Anụ Olu Chineke, ma Hà Ga-enwenụ Okwukwe?
jy isi 104 p. 242-243